Xog ku saabsan Doorashada Kursigii uu ka geeriyooday Cabaas Siraaji. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xog ku saabsan Doorashada Kursigii uu ka geeriyooday Cabaas Siraaji.
Xog ku saabsan Doorashada Kursigii uu ka geeriyooday Cabaas Siraaji.
February 13, 2018 admin372
Dowlad Gogoboleedka Jubbaland ayaa joojisay qabanqaabada Doorasho Musuqmaasuq aheyd oo ay wadeen Gudiga doorasha ay Xaliima yarey, Gudoomiyaha ka tahay. Ergo been abuur ah ayaa la rabay in caawa lagu sawiro Hotel MAKA, oo ku yaalla Magaalada Kismaayo waxaa arintaas joojisay Dowlad goboleedka Jubbaland.
Xuseen oo ka tirsan Gudiga Doorasha oo xiriir la leh Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa wada Musuqmaasuqa ugu badan, arintaan waxaa iyada raali ka ah Xaliimo yareey oo ah Gudoomiyaha Gudiga doorashada.
Dhinacakale waxaa socda shirar xasaasi ah oo ay leeyihiin dadka wax tabanaaya oo ka cabanaaya musuqmaasuq weyn oo ay wadaan Gudiga doorashada, BEESHA HUBEER, ayaa arinta socota kasoo horjeesatay, waxayna bogaadiyeen tallaabada Maamulka Jubbaland ay ku joojiyeen Doorashada musuqmaasuqa aheyd.
Wixii ilaa caawa soo kordha waan idinla soosocodsiineynaa
Wasiirka Gashandhiga oo isku sharaxay Gudomiyaha Barlamaanka